Bail muDubai: Kuburitswa Pakusungwa | Mutemo Makambani Dubai
Kusunungurwa Paunenge Usungwa
Bail muDubai, UAE
Chii chinonzi Bail?
Bail inzira yepamutemo yekupa munhu achipomerwa mhosva yaakapara kuburitswa kwechinguva nekuisa mari, bond, kana pasipoti chibvumirano kudzamara kwapera kuferefetwa kana kana dare rikatora danho pamusoro penyaya yacho. Maitiro ebheji eAU haana kudaro akasiyana neanowanikwa mune dzimwe nyika pasirese.
Kubuda mutirongo pane bheji kunogona kuve nyore
mitemo yemunharaunda yeUAE
Tungamira Pamusoro peKuburitswa Pabhiri Pamusoro pekusungwa MuAU
Maitiro ebheji kana akasungwa senge UAE Mutemo
Chinyorwa 111 cheAUE Criminal Procqubo Mutemo chinotonga nzira yepamutemo yekupa bheji. Maererano nazvo, sarudzo yebheyili inoshanda zvakanyanya kumatare matsotsi matsotsi, misdemeanors, ayo anosanganisira akabhadharwa cheki uye dzimwe mhosva. Asi nezvemhosva dzakakomba zvikuru sekuuraya, kuba, kana kuba, izvo zvinouya neupenyu hwese kana mutongo werufu, bail haishande.
Kana munhu anopomerwa akangosungwa nemapurisa kuUAE uye nyaya isati yaendeswa kudare, munhu wacho kana gweta rake, kana hama yake inogona kuendesa chikumbiro chekuburitswa mubhiri kuPublic Prosecution. Veruzhinji Muchuchisi ari kupomerwa kuita sarudzo dzese dzebheyili mukuferefetwa kwacho.
Iyo Guarantor's Passport inogona kuendeswa
Bheji inorambidza kuoneka kweanopomerwa kuti aenderere mberi mafambiro edare uye ave nechokwadi chekuti havaedze kutiza nyika. Uye kuvimbisa izvi, pasipoti yemunhu anopomerwa inochengetwa, kana iya yemhuri yake, kana guarantor. Mari yebhezari inogona zvakare kuiswa pasi peChinyorwa 122 cheCriminal Law .. Izvi zvinogona kuitwa kana pasina pasipoti asi zvinoenderana nechisarudzo cheMuchuchisi kana Mutongi. Nekudaro, iko kusarudzika kweAUE Court kuti vape kana kuderera. Kazhinji, dare rinopa bhezari asi isu tinoda ruzivo rwakakwana uye rwakazara kuti tikupi zano zvakafanira.
Anovimbisa mumwe-iye anovimbisa (anozvidavirira zvakakwana) maitiro emunhu anopomerwa pakumusunungura mujeri. Guarantor anofanira kuziva uye kungwarira nezve kuchengeta pasipoti yake. Bhandi bhandi chiitiko chemakurukota chakasainwa naiye guarantor chichiita kuti ave nemhosva yezvakaitwa nemupomeri, paakatadza kuenda kumatare edzimhosva.
Iva nenyanzvi magweta ekuti utore bheji
Zvichienderana nehunhu uye simba remakesi, tinogona kuita chikumbiro mubhawa kuDubai, zvikumbiro zvebheyili zvinovaraidzwa nematare. Isu tiri nyanzvi dzemagweta dzekuwanira chikwereti kune vatengi vedu vanopomedzerwa maererano nemutemo wekupara mhosva uye kukubvisa mujeri.
Bail inogona kupihwa na:
Mapurisa, vasati vaendesa nyaya iyi kuPublic Prosecution;
Kupomerwa Paruzhinji, vasati vaendesa nyaya yacho kudare;
Dare, isati yapa mutongo.
Passport Zvinodiwa kuti ukwanise kuendesa sechipo chebhaa rubatso:
Pasipoti inofanirwa kuve inoshanda.
Visa inofanira kuve inoshanda.
Izvi zvinoreva kuti munhu abvisa visa yake haakwanise kuendesa Passport yake sechipo chebhebhi. Kana munhu achipomerwa mhosva akangoburitswa bhezari, anopihwa “Qafala,” iro gwaro rebheyili rinowanikidza bhezari pasi.
Kana nyaya yacho ikazopedzisira yadzingwa kana kuvharwa, ive iri mukuferefetwa kana kuti kana yaendeswa kudare, garandi rezvemari rakaiswa sebhiri rinodzoswa rakazara uye muvimbisi anoburitswa kubva pane chero chinhu chakasainwa.
Bail Inogona Kudzurwa
Chinyorwa 115 cheCriminal Proc inqubo Mutemo unopa kubviswa kwebhiri kunyangwe mushure mekutenderwa kana kuurayiwa, zvichibva pane zvikonzero zvinotevera
Kana mabheji akatyorwa nemupomeri, semuenzaniso, kusaenda kuongororo kana musangano wemisangano sezvakataurwa nePublic Prosecution.
Kana mamiriro ezvinhu matsva mukwiriri akasimuka anofanirwa kutora matanho akadaro, semuenzaniso, kana munhu akapomerwa akafanorongerwa mhosva, kuburitswa kwebheji kwakaremara.
Kubuda mutirongo pane bheji kunogona kuve nyore kana ukanyorera rubatsiro rweaneruzivo neruzivo rwekuzvidzivirira mhosva ane ruzivo uye ane ruzivo nemitemo yemuno ye UAE. Rudzi urwu rwemutemo rinogona kugara ruchipa mazano pamitemo inoshanda uye nekumiririrwa kwemutemo kubatsira kuchengetedza kusunungurwa.
Pane mhinduro pamatambudziko ese ari pamutemo
Easy kune vatengi veNyika